भट्टराईपक्षीय नेताले सामूहिक रुपमा एमाओवादी छाड्दै, गोप्य भेला जारी (नामावलीसहित)
गोप्य भेला भट्टराई निवास सानेपामा, सांसदहरुले तत्काल पार्टी नछाड्ने
काठमाडौं, १६ कात्तिक । केही समयअघि एकीकृत नेकपा माओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति निर्माणको गृहकार्यमा जुटेका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई सघाउन उनी निकट एमाओवादी नेताहरुले पार्टी परित्यागको तयारी गरेका छन् ।
एमाओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति निर्माणको गृहकार्यमा जुट्न भट्टराई पक्षीय नेताहरु भट्टराईकै निवास सानेपामा छलफलमा जुटेका छन् । सानेपामा जारी गोप्य भेलाले भावी रणनीति तयार पार्नेछ ।
अहिले सानेपामा भेला भएका नेताहरु तत्कालै पार्टी परित्याग गरेर ‘नयाँ शक्ति सहयोग अभियान’ मा जोडिने तयारी भएको भेलामा सहभागी एक नेताले साझापोस्टलाई बताए । पार्टी परित्यागको तयारीमा रहेका नेताहरुमा अधिकांश एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य र त्यसभन्दा माथिल्लो बरियतामा रहेका नेताहरु छन् ।
यद्यपी सा‌ंसद रहेकाहरुले भने तत्काल पार्टी नछाड्ने स्रोतले बतायो । उनीहरु पछिमात्रै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा जोडिनेछन् । भट्टराई पक्षीय सांसद्हरुले तत्काल पार्टी नछोड्ने भएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तमान सत्ता गठबन्धनले केही राहत महसुस गर्नेछ ।
एमाओवादीबाट को-को जोडिँदैछन् भट्टराईको अभियानमा ?
स्रोतका अनुसार एमाओवादी परित्यागको तयारीमा रहेकामध्ये देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ भट्टराई पछि सबैभन्दा शीर्ष एमाओवादी नेता हुन् । उनी एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन् । यसअघि भट्टराई पक्षमा रहेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी हाल संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेको र पार्टीकोतर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा समेत सहभागी भएकाले पौडेल भट्टराईपछि पार्टी परित्याग गर्ने सबैभन्दा शीर्ष बरियताको एमाओवादी नेता हुनेछन् ।
यसैगरी पोलिटव्यूरो सदस्य हिसिला यमी (भट्टराई पत्नी) तथा रामचन्द्र झा पनि ‘नयाँ शक्ति सहयोग अभियान’मा जोडिँदैछन् । उनका अलावा नेताहरु गंगानारायण श्रेष्ठ, रामरिझन यादव, प्रभु शाह, खिमलाल देवकोटा, कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, घनश्याम यादव, उपेन्द्र साह, रामकुमार शर्मा, नवराज सुवेदी, महेन्द्र पासवान, कुमार पौडेल, वामदेव क्षेत्री , लीलबहादुर थापा, बलावती शर्मा, देवी खड्का, लीला भण्डारी, खगराज भट्ट, कर्णध्वज केसी, कृष्ण शर्मा, हेमराज भण्डारी, चिनक कुर्मी, सुशीला श्रपाइली, सोनामसिंह स्याङतान, देवराज रेग्मी, राजेन्द्र किराँतीले पनि एमाओवादी परित्याग गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ ।
पार्टी परित्याग गर्ने नेताहरुको यकिन सूची भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
सामूहिक पार्टी परित्यागclose